Fisorohana ny famoriam-bahoaka :: Ireo raharaha maika sisa no miakatra Fitsarana • AoRaha
Fisorohana ny famoriam-bahoaka Ireo raharaha maika sisa no miakatra Fitsarana
Nandray fanapahan-kevitra fampiatoana an’ireo raharaham-pitsarana tsotra rehetra, eny anivon’ireo Fitsarana manerana ny Nosy, ny minisiteran’ny Fitsarana. Voalazan’ ny toromarika navoakan’izy ireo fa ireo raharaha tena maika sy ny fiandrasan-draharaha irery ihany no mandeha.
Miato avokoa ny sisa. Voakasik’itsy baiko itsy avokoa ireo sampan-draharaham-pitsarana isan-tsokajiny, toy ny Fitsarana ambaratonga voalohany, ny Fitsarana Tampony, ny Fitsarana manokana miady amin’ny kolikoly… ary ireo Sekolimpirenena fampiofanana ho mpitsara sy mpiraki-draharaha na ny toeram-pampiofanana momba ny fandraharahana ny fonja.
“Miato ny fandraisana an’ireo raharaha vaovao mandrapisian’ny toromarika hafa. Mitohy hatrany ny fampandehanana an’ireo taratasin’ady maika tsy maintsy halefan’ny Fampanoavana any amin’ireo mpitsara mpanao famotorana. Ny mpitandro filaminana no mitazona an’ireo fitoriana vaovao. Mila mifandray amin’ireo tompon’ andraikitra eny anivon’ny Fitsarana ry zareo mba hahafahana mamantatra raha ilaina maika ny fitsarana ny raharaha”, hoy taratasin’Andriamahefarivo Jhonny Richard, minisitry ny Fitsarana.
Natsahatra kosa ny famangiana an’ireo voafonja fa ny fanaterana sakafo no mitohy. Horarahana fanafody avokoa ny fonja sy ny manodidina azy ary ireo fiara fitaterana gadra. Ankoatra izay, tsy maintsy hotilina sy harahina maso akaiky, mandritra ny efatra ambin’ny folo andro, ny fahasalaman’ireo gadra vaovao haiditra ny fonja.
Fiainana klioba Misedra olana ry Thomas Fontaine
Fanamafisana hery fiarovana Nilaharana ilay fanafody vokarin’ny IMRA
Seho nahemotra Mbola manan-kery ireo tapakila efa lafo
Fivoaran’ny valanaretina Niampy efatra ireo voan’ny « Coronavirus »
Fandrobana vahiny :: Frantsay maty nokendain’ny jiolahy
Famoaham-baovaon’ny valanaretina :: Misokatra ny ivon-toerana momba ny “coronavirus”
Fifindrana aretina « Coronavirus » Olona iray voa rehefa nifampikasoka tamin’ny marary
Fanelezana vaovao tsy marina Tambazana dimy tapitrisa ariary ny fikarohana vehivavy iray
Voina an-dranomamy Olona telo tsy hita popoka navadiky ny lakana lehibe
Fiparitahan’ny valanaretina Tafakatra sivy ambin’ny folo ny olona voan’ny “Coronavirus”
Fiparitahana valanaretina Niampy dimy ireo olona voan’ ny “coronavirus”